PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-10-18 - Babethwe ngumbane wezulu babhubha!
Babethwe ngumbane wezulu babhubha!
Isolezwe lesiXhosa - 2018-10-18 - FRONT PAGE - ABONGILE GINYA
UBUSO bebumoshakele, iimpahla zikrazukile ebezinxitywe ngabantwana ngethuba zikrazulwa lizulu. Lo mbono mbi wenzeke kuKomani ngeCawe, ngethuba kufike isithonga sombane kanti lizulu eliza kuthi lidlule nobomi babantwana abaselula.
Oku kwenzeke emva kwemini ngakwisikolo samabanga aphezulu iNkwanca kwilokishi yaseMlungisi kuKomani. Usapho lomnye wabantwana abathe babethwa lizulu wabhubha lakwaSidandala eMlungisi, luthi oku kuyaqala ukwenzeka kusapho lwabo kanti nakwindawo yakwaMlungisi.
Iingxelo zithi amaxhoba ebehamba emane, amantombazana amabini kwakunye namakhwenkwe amabini ngethuba ethunywe kwilali engaphesheya ekuthiwa kukuDalindyebo.
Bahlaselwe ngumbane besahamba, ze ababini abangamantombazana babhubha ngoko nangoko logama abanye ababini bathe baleqiswa esibhedlele. Ngethuba sityelele kuKomani ngoMvulo, elinye ixhoba belisesesibhedlele logama elinye besele likhutshiwe.
KwaSidandala sifike usapho luzolile ngenxa yomphanga wokubhujelwa ngumntwana wabo uLiyabona (11) obesenza uGrade 5 eLukhanji JSS.
Eli likhaya apho elihlelelekileyo, elixhomekeke kwimali yepeyi kamakhulu wekhaya uMayina Phuthukazi, 90. ULiyabona ebehlala nomama wakhe uThabisa Sidandala, umakhulu wakhe kwakunye noodade wabo.
UThabisa (34) uthi eli linxeba elibuhlungu kuye lokushiywa ngumntwana wakhe ngolu hlobo. Usapho luthi emva kokuba beve ezi ndaba kube buhlungu kubo kakhulu. “Khange sikwazi ukuya kwindawo yexhwayelo, kodwa abaziboneleyo bathi bekukubi, izulu likrazule neempahla zabantwana. “Owam ke yena ibingoyena wonzakele kakhulu kunabanye kuba icala lobuso beliluhlaza. Kuye kwanyanzeleka ndijonge umfanekiso wakhe kwifowuni ebendiboniswa kuyo kuba ndifike sele umkile umzimba wakhe,” utshilo uThabisa.
Utata omdala nolilungu losapho, uMonde Sidandala, uthi kunzima kuba ixhoba belixhomekeke kwimali kaninakhulu yepeyi. Uthi lo ibingumntwana othumekayo, othandekayo ekhayeni, esoloko esenzela uninakhulu wakhe iti.
I’solezwe lifike kwiinyawo zeSebe loPhuhliso loLuntu lakuKomani, nalapho usapho ludiza ukuba eli Sebe lithembise ngokuxhasa ngokutya kweli khaya. UNomzi Baleni nongumakhelwane kweli khaya, uthi ibihlungu kwaye imbi into ethe yenzeka kwaye ibiqala ukwenzeka kwaMlungisi.
Abantwana bebehamba bebane, abathathu ngabosapho olunye ebebethunywe nguninakhulu wabo. Kubhubhe ababini, ababini basindile, omnye kubo usesesibhedlele. UKapteni Namhla Mdleleni uthi amapolisa avule amatyala amabini.
UThabisa Swayeti Sidandala kwilokishi yakwaMlungisi kuKomani obhujelwe ngumntwana obethwe lizulu ngeCawe